2013-06-30 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မေးလ်​ထဲ​မှာ ​တောင်း​ထား​လို့ ​ထပ်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. youtube ​က video link ​တိုင်း​ကို Download ​လုပ်​ပေး​တဲ့ Downloader ​ပါ. website ​က​နေ ​တစ်​ခါ​တည်း convert ​လုပ်​ပြီး​တော့ ​တစ်​ခါ​တည်း download ​လုပ်​ချင်​ရင်​တော့ ​နည်း​တစ်​ခါ​တည်း ​ပြော​ပြ​လိုက်​ပါ့​မယ်. ​အောက်​မှာ ​ပြော​ထား​သ​လို ​တ​ဆင့်​ချင်း​စီ ​လုပ်​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​လို ​ဆိုက်​က​နေ leech ​လုပ်​ပြီး Download ​လုပ်​မယ် ​ဆို​ရင်​တော့ ​ခု​တင်​ပေး​တဲ့ youtube downloader ​မ​လို​တော့​ပါ​ဘူး။ ​တစ်​ခါ​တည်း Download ​လုပ်​ယုံ​ပါ​ပဲ။ ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
Website ​က​နေ Youtube video ​ကို ​ဘယ်​လို ​တန်း Download ​လုပ်​နည်း
​မိ​မိ Download ​လုပ်​လို​တဲ့ Youtube video ​ရဲ့ link ​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ။ (Link ​ယူ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ youtube video ​ဖိုင် ​အောက်​ခြေ​မှာ Share ​ကို​နှိပ်​ပြီး ​ထွက်​လာ​တဲ့ video link ​ကို ​ကူး​ယူ​လိုက်​ရ​မှာ​ပါ)
​မိ​မိ​ကူး​လာ​တဲ့ share link ​ကို http://keepvid.com/ ​ထဲ​ကို​သွား​ပြီး ​ကူး​ထည့်​လိုက်​ပြီး Download ​ကို​နှိပ်​ပါ.
​ပ​ထ​မ​ဖိုင်​ဆို alarm box ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် accept ​ပေး​ပြီး Run ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ။ ​အဲ့​ဒါ​ပြီး​ရင်​တော့ ​အဲ့​မယ် 3GP, FLV, MP4, WEBM, MP3 ​စ​တဲ့ ​လင့်​နဲ့ leech ​လုပ်​ပေး​လိုက်​တာ ​တွေ့​ပါ ​လိမ့်​မယ်. ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် ​ကို​ကြိုက်​တဲ့ Link ​ကို ​နှိပ်​ပြီး​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ. ​ဖုန်း​ထဲ ​ထည့်​ချင်​တဲ့​သူ​များ​က Download 3GP ​ကို ​နှိပ်​ပြီး Download ​လုပ်​ယူ​ယုံ​ပါ​ပဲ။ ​တစ်​ခု​ထပ်​ပြော​ချင်​တာ​က ​သူ့​ဘေး​နား​က ​ဖိုင်​ဆိုက်ဒ်​တွေ​က​တော့ quality ​မြင့်​တဲ့ video ​ဆို​ရင် ​ဖိုင်​ဆိုက်ဒ်​ကြီး​နေ​မှာ ​ဖြစ်​ပါ​တယ်. ​အဲ့​တော့ ​ဖိုင်​ဆိုက်ဒ်​ငယ်​တာ​ကို ​ရွေး​ပြီး​တော့ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပေါ့.
​ကဲ youtube downloader ​နဲ့ ​ဒေါင်း​ချင်​သူ​များ ​က​တော့ ​အောက်​မှာ Downloader ​ကို ​ယူ​လိုက်​ပါ။
Zippyshare | Ziddu | Sharebeast | Solidfiles | Rapidshare | Filefloud | Mirrorcreator | Tusfiles
CCleaner Professional + Business Edition 4.03.4151 Final
Internet Explorer | Firefox | Google Chrome | Opera | Safari ​စ​တဲ့ browser ​တွေ​ရဲ့ privacy, history ​စ​တာ ​မိ​မိ​အင်​တာ​နက် ​သုံး​ခဲ့​တဲ့ ​အ​ချက်​အ​လက်​တွေ​ကို ​ဖျက်​ပေး​တဲ့ program ​ပါ​ပဲ. ​အင်​တာ​နက် ​သုံး​ပြီး​လိုက် ​လိုက်​ဖျက်​စ​ရာ​မ​လို​ဘဲ​နဲ့ CC cleaner ​ကို run ​ပြီး ​ဖျက်​ပေး​လိုက်​ယုံ​နဲ့ ​အား​လုံး​ပျက်​ပါ​တယ်။ ​ဒါ့​အ​ပြင် Recycle Bin, Recent Documents, Temporary files and Log files. ​စ​တဲ့ ​မ​လို​အပ်​တဲ့ ​ဖိုင်​တွေ​ကို​လည်း ​ဖျက်​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ်. Registry cleaner ​အ​တွက်​လည်း ​ပါ​ဝင်​ပါ​တယ်။ ​ကွန်​ပျူ​တာ ​သန့်​ရှင်း​ရေး software ​ဆို​လည်း ​မ​မှား​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ​ကဲ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ.
Zippyshare | Ziddu | Sharebeast | Solidfiles | Rapid | Filefloud | Tusfiles | Mirrorcreator